I-99.9% yodokotela baseMelika abayiboni i-Apple Watch njengethuluzi lezokwelapha | Ngivela ku-mac
I-99.9% yodokotela baseMelika abayiboni i-Apple Watch njengethuluzi lezokwelapha
UManuel Alonso | | eziningana
I-Apple Watch iyithuluzi okuthi ngokuhamba kweminyaka lisize abantu abanezinkinga zenhliziyo nokunye okuningi. Eqinisweni, kungenzeka ukubala amacala lapho kuxoxwa khona ukuthi ngenxa yezinzwa nokubikezela kwewashi, izifo ezithile zenhliziyo ziye zabanjwa ngesikhathi obekungase kuqede ukuphila kwalowo msebenzisi wewashi. Nokho, konke lokhu akwenzi odokotela base-US bawuthembe lo mshini. Ngokwezifundo ezithile, U-99.9% wabo ubengeke asebenzise i-Apple Watch ukulandelela noma ukwelashwa. Nokho, isetshenziselwa ucwaningo futhi inemiphumela emihle kakhulu.
Yize sinakho izimo ezimbalwa zabantu abasindise izimpilo zabo ngenxa yezinzwa ze-Apple Watch, isazi sokusebenza kwengqondo emitholampilo uMichael Breus sithi i-99.9% yochwepheshe bezokwelapha abakakusekeli kakhulu ukusetshenziswa kwayo emkhakheni wezokwelapha. Ku isihloko esisha esivela ku-Financial Times, odokotela abahlukahlukene nabanye emkhakheni wezokwelapha baye bachaza kabanzi ubunzima bokufaka i-Apple Watch ekunakekelweni kwesiguli nsuku zonke. Abanye bathi ikusasa lapho i-Apple Watch empeleni ithuthukisa impilo yabasebenzisi ngezinga elikhulu lisekude kakhulu.
Manje, emkhakheni wocwaningo, kubonakala sengathi i-Apple Watch inabalandeli bayo. Ngokusho kwe-CDC, izifo ezingamahlalakhona ziyizinto eziyinhloko zamaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane ezingu-3.8 eyachithwa e-United States ekunakekelweni kwezokwelapha e-United States. Ngokuvamile zingavinjelwa ngokuzivocavoca, ukudla, kanye nokutholwa kusenesikhathi. Kusemkhakheni wocwaningo kanye nokuqapha lapho kungaba wusizo khona. Isibonelo:
UShruthi Mahalingaiah, umcwaningi waseHarvard, ubesebenzisa izizukulwane ezimbalwa ze-Apple Watch ukulandelela umjikelezo we-ovulation wabesifazane abangu-70,000 ocwaningweni olukhulu.
UDkt. Richard Milani, iphini likamongameli we-cardiology e-Ochsner Health, ubesebenzisa i-Apple Watch, phakathi kokunye, ukuqapha amaphuzu edatha ezinkulungwaneni zeziguli nokusebenzisa ubuhlakani bokwenziwa ukuze ukubikezela imiphumela futhi unqume ukuthi yibaphi abantu okungenzeka bagule kakhulu.
Kuzodingeka siqhubeke silinde odokotela ukuthi basebenzise i-Apple Watch emkhakheni oqondile kunocwaningo. Lokhu kuzosiza ukwenza okokuqala kufezeke.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » eziningana » I-99.9% yodokotela baseMelika abayiboni i-Apple Watch njengethuluzi lezokwelapha
UKuo ubuka kuqala izindaba mayelana ne-AirPods Pro 2
I-Bluetooth ubuchwepheshe obukhawulela ikhwalithi yama-AirPods